ကြက်ဥအရည်ကို ပါစတာပြုလုပ်ခြင်း- Ohmic အပူပေးနည်းပညာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အကြောင်းရင်း3ခု
2000 ခုနှစ်များအစောပိုင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြက်ဥ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ပါစတာသုတ်ထားသော ကြက်ဥအရည်ထုတ်ကုန်များ၏ သိုလှောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများကို စတင်ရှာဖွေခဲ့သည်။
အစားအသောက် သုတေသနစင်တာများနှင့် တက္ကသိုလ်များနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစားအသောက်ကိုင်တွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာအမျိုးမျိုးကို အကဲဖြတ်ကာ အရည်ထုတ်ကုန်ကို ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းနှင့် ထိတွေ့နိုင်သော အလားအလာရှိသော နည်းပညာတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ရာနှင့်ချီသော စမ်းသပ်မှုများကို ကြက်ဥအရည်တွင် ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းအသုံးပြု၍ အပူချိန်နှင့် ကိုင်ဆောင်ချိန် ကွဲပြားမှုများရှိသော်လည်း ကြက်ဥထုတ်ကုန်အပေါ် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း၏ သက်ရောက်မှုများကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အံ့အားသင့်စရာမှာ၊ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းကို ကြက်ဥအရည်သို့ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမှာ အံ့သြစရာပင် ဘက်တီးရီးယားပိုးမ၀င်ခြင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။. အစား၊လက်ျာရောနှောပေါင်းစပ် အပူချိန်နှင့် ကိုင်ဆောင်ချိန် အကောင်းဆုံး ကြက်ဥ pasteurization ရလဒ်များ ရရှိရန်အတွက် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းပညာ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုတို့တွင် ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီး အသုံးချနိုင်သော pasteurization နည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ohmic အပူပေးခြင်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနကိုအခြေခံ၍ ဤတွင် ohmic အပူပေးခြင်းသည် radiofrequency ထက်ပိုမိုထိရောက်သည့်အကြောင်းရင်းသုံးချက်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းရင်း # 1- စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု
ဖြုန်းတီးခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းသည် 65% ဝန်းကျင်ရှိပြီး ohmic အပူပေးခြင်းထက် 50% ပိုမိုပါဝါလိုအပ်ပါသည်။ ohmic အပူပေးခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု 95% ရရှိပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု 50% လျော့နည်းကာ အလုံးစုံထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။
အကြောင်းရင်း # 2- တိကျမှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊ လုံခြုံမှု
မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းနှင့်ဗို့အားပါဝင်ပြီး အပူပေးခြင်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများ ပြန့်ကျဲသွားခြင်းကြောင့် ထုတ်ကုန်အတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ရှော့တိုက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပိုက်များတွင်လည်း ပြင်ပတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ ကြက်ဥအရည် ထုတ်ကုန် (လေပူဖောင်းများကဲ့သို့) ပုံမမှန်မှုများ ပေါ်လာသောအခါ၊ ဒါဟာအတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည်, ကြက်ဥအရည်အမြဲတူညီကြသည်မဟုတ်။
Ohmic အပူပေးခြင်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဗို့အားနိမ့်သောနေရာတွင် အလုပ်လုပ်ပြီး အရည်သည် တစ်သမတ်တည်းမဟုတ်ပါကပင် တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေသည့် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို dissipation ဖြင့် မထုတ်ပေးဘဲ ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုအန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားပြီး ထုတ်လုပ်မှုဘေးကင်းမှုကို တိုးမြှင့်စေသည်။
အကြောင်းရင်း 3- ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများအပေါ်အခြေခံသည့်နည်းပညာများသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ ဈေးကြီးပြီး မကြာခဏဆိုသလို ထိရောက်မှုမရှိသော၊ အရင်းအမြစ်နှင့်ဝယ်ယူရန်အလွန်ခက်ခဲသော၊ အထူးသဖြင့် ယူနစ်၏အူတိုင်ဖြစ်သည့် thermionic valve နှင့်ပတ်သက်သော အလွန်စျေးကြီးပြီး သက်တမ်းတိုသော သက်တမ်းတိုအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုပါသည်။
ohmic အပူပေးစနစ်သည် မော်တာယာဉ်မောင်းတိုင်းတွင် ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Thermionic valve သည် မည်သည့်ခေတ်မီ အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အအေးခံရန်အတွက် စွမ်းအင်ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ohmic အပူပေးသည့်အရည်ဖြင့် ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ CapEx နှင့် OpEx ကို အလွန်အမင်း လျှော့ချသည်။
ထိရောက်မှု အကျိုးကျေးဇူးများအပြင်၊ နိမ့်သောအပူချိန်နှင့် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအပေါ် မှီခိုခြင်းသည် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အပူချိန်နှင့် ကိုင်ဆောင်ချိန် ထိန်းချုပ်အာဏာပိုင်များမှ pasteurization တွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးမဝင်ခြင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုကိုပြသသည့် တစ်ခုတည်းသောလက်ခံပြီး သက်သေပြနိုင်သော ကန့်သတ်ဘောင်များဖြစ်သည်။ တကယ်တော့၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်နှုန်းကို D-value နှင့် Z-value တို့ဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အသိအမှတ်ပြုထားပြီး အချိန်နှင့် အပူချိန်တို့နှင့်သာ ဆက်စပ်နေပါသည်။
SANOVOs WAVE နည်းပညာသည် ထုတ်ကုန်၏ သက်တမ်းထက် ရက်ပေါင်း 90 ကျော်၊ ဘက်တီးရီးယားများကို သတ်နိုင်နှုန်း 10 ဆ ပိုမြင့်မားသည်၊ ပရိုတင်းဓာတ် ကင်းစင်မှုနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု မြင့်မားသည် ဟု ကတိပြုထားသည့် ohmic အပူပေးနည်းပညာကို အခြေခံထားသည်။ ဤတွင် WAVE နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သော နောက်ဆုံးပေါ် အဖြူရောင်စက္ကူ.
ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းနှင့် ohmic အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် WAVE နည်းပညာတို့ကြား ခြားနားချက်များကို သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယ်ပါ။ အထူးကုအဖွဲ့.
ဒုတိယဥက္ကဌ / ထုတ်ကုန် & စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ကြက်ဥထုတ်လုပ်ခြင်း